Ukuze ukhulise kakuhle ipilisi kunoma yimuphi uhlanga, kufuneka ukwazi indlela yokusingatha ngayo. Ngokomzekelo, wanquma ukuphakamisa i-spaniel. Yintoni endiyenzayo? Indlela yokuphakamisa intsapho ye-spaniel yaseRussia ukuze ibe ngumzingeli olungileyo kunye nomhlobo.
Kule nqaku siya kuzama ukunika iimpendulo malunga nendlela yokuvelisa i-puppy spaniel puppy. Ngoko, okokuqala, ungathathi i-spaniel yaseRussia endlwini, ukuba umntu akayi kumkholisa. Khumbula ukuba kwimfundo efanelekileyo ye-puppy, wonk 'ubani uya kufuneka abeke umzamo omkhulu kwaye ahlale enomonde. Ngaphandle koko, awufumani nje ukuba uvelise inja epheleleyo, eyaneleyo nengqiqo. Ngoko ke, lungele uhlawulele into ethile kwi-spaniel yakho ende.
Ngoko, xa uzisa i-spaniel yaseRashiya endlwini, qinisekisa ukuba indawo apho inja ehlala khona iya kuba yinto efanelekileyo kakhulu kwaye ikhululekile kuye. Ngoko ke, i-spaniel kufuneka ihlaziywe apho iya kuthula khona kwaye ayiyi kuvutha. Ngendlela, abantu abaninzi bafuna ukubeka intsapho kufuphi nemithombo yokufudumeza, kodwa akufanelekanga ukwenza njalo. Njengokuba ubhede inja, kukulungele ukuthatha ikotoni okanye i-mattress yeenwele, eya kuba nekhava elikhutshwayo. Kwakhona, ungasebenzisa ibhedi ekhethekileyo, ukuphakama kweeshumi ukuya kwishumi elinesentimitha okanye umthamo oqhelekileyo. Khumbula ukuba ekuqaleni inja iya kukhanya. Oku akukona ngenxa yokuba abanikazi bamandulo babengenako ukumphakamisa. Ngokulula, u-spaniel ulahlekelwa ngumama, abazalwana kunye noodadewabo. Ukuze umenzele ukutshatyalaliswa kokufudumala komama kunye nentuthuzelo ebusuku, faka ipayipi yokufudumala phantsi kwe-matting, okanye uyifake nge-coverlet ebolile. Kuphela, nangona kunjalo, ungabonakali ububele kwaye ungathathi intsana ukulala. Kakade, oku kunzima ukuchasa, kodwa, kule meko, kufuneka ubonise amandla, ngaphandle koko, ngeli nqanaba, imfundo ye-spaniel iya kuphutha. Ngokuqinisekileyo, musa ukumemeza inja uze ucaphuke. Kodwa, kuyimfuneko ukuthetha ngetoni eqinile kunye neyokuzola, ukumyala ukuba ahambe. Xa uzisa i-puppy ekhaya, qiniseka ukuba uhlambe ngesepha sentsana okanye i-shampoo yomntwana. Kuphela, akufuneki ukwenza oku ngaphambi kokulala. I-spaniel kufuneka ibe nexesha lokuqhuba nokuma. Emva kokuhlamba, inja kufuneka isuswe ngomile ithawula. Ngendlela, intshontsho ye-spaniel yaseRashiya, njengokuba, ngokwenene, ummeli waluphi na uhlobo oluthile, lusetshentshwe kakhulu ngosuku. Ngaloo ndlela, unokukwazi ngokukhawuleza onke amalungu entsapho kwaye aqheleke. Ngoko, yibuyisela inja ekhaya kwikota yokuqala.
Unokuhlamba inja yakho ngaphezu kweyinye iinyanga ezimbini. Kodwa, kufuneka ukuba ngoko nangoko ijwayele ukuba emva kokuhamba nganye, uya kusula i-paws kunye nesisu okanye uhlambe emanzini afudumele, angatshwanga.
Ukuze isilwanyana sakho sibe sempilo, qaphela eso sifo njengesibetho. Ukuze uhlanyele intshontsho yakho, ungamvumeli ukuba adibanise izinja kunye neekati, kwaye ungangeni ekamelweni apho ehlala kwizihlangu eziphuma esitalato. Ukuba inja iyagijima ngeenxa zonke endlwini, xa ufika kwindlu, hlamba izihlangu ngokukhawuleza. Inyaniso kukuba isifo sesifo sesibetho sisifo esicatshulwa ngokulula kwaye sinokuphumela ekufeni. Ngako oko, khusela isilwanyana sakho kwaye ugonyile kwiminyaka emibili okanye ezimbini nesigamu. Ngendlela, kuya kufuneka ukuba iphindwe kwiinyanga ezintandathu ukuya kwezilishumi. Ezi zitofu kufuneka zenziwe kwinja phambi kokuba amazinyo omntwana aphelelwe. Inyaniso kukuba ephuma kwiziyobisi ezisetyenziselwa i-inoculation, i-caries ikhula.
I-spaniel encinane ifuna ukutya, ukulala, ukudlala kunye nokuhlaziya. Kule nto ayikho into engaqhelekanga, ngoko ke, abanini kufuneka bafike ngeemathoyizi kuye, ukuphazamisa isilwanyana esilungileyo kwifenitshala, iipeteni kunye neencingo zombane. Ngendlela, hlawula ingqalelo kwiingcingo. Kubalulekile ukuphakamisa ngokuphakamileyo kunokwenzeka, ukuze i-spaniel ingaqali ukuyigubungela, kwaye akazange ahlaselwe ngengozi ngombane. Ukudlala imidlalo kunye nenja, sebenzisa amathambo amakhulu amakhulu, iintsimbi zeerubha, iibhola ze-tennis, izaqathe. Kodwa iimveliso zeplastiki kunye nemithi zingcono kunokuba inja yakho inganiki. Dlala nayo ukuze inja isebenze ngokusemandleni. Unako ukuxhoma amathoyizi ngaphantsi komgangatho ukuze azingele. Ukuba uya kusebenzisa i-spaniel ngokuzingela kwixesha elizayo, akudingeki ukuba unike iintsiba kumdlalo, ngaphandle kwenja inja iya kubhuqa kwaye ibhuqe.
Kwakhona, ukuze ukhuliswe kakuhle, kufuneka uhlale ukwazi ukunika imiyalelo ngokucacileyo. Kakade, kunye nenja kuyimfuneko ukuthetha, kuba, udinga ukunxibelelana, ngaphantsi komntu. Kuphela apha ngethuba loqeqesho, awukwazi ukusebenzisa amagama angaphezulu, ngaphandle koko inja iya kukhangeka kuyo, ingaqondi apho iqela lilapha khona, kwaye apho lingekho kwaye ayiyi kukuphulaphula. Ngaloo nto, le ngxaki yabanini abaninzi, izilwanyana zazo ziba nzima ukuba zingabinakunceda, ngenxa yokuba zahluleka ukuzifundisa kakuhle.
Ungalokothi ugcine i-spaniel yakho ibotshwe yonke imini. Ngaphandle koko, unokuthi abe neyilungu kunye nezifo zentlanzana. Kodwa, ngexesha elifanayo, kuyimfuneko ukuqinisekisa ukuba inja yazi kusukela ebuntwaneni ukuba akunakwenzeka ukulila, ukucima kunye nokugquma xa kungekho mnikazi osondeleyo. Ngeenyanga ezintathu, qalisa ukujwayelana ne-spaniel kwi-collar kwaye uhlawule. Ikhola kufuneka yonyulwe enye eyenziwe yesikhumba esithambileyo, ukuze ingagxothi intamo yenja. Ngokuhamba kwexesha, inja iya kuba isetyenzisiweyo kule ncediso eyimfuneko ukuba iya kuqala ukuyifaka intamo kuyo xa uhamba ukuhamba. Into ephambili kukuba umxelele ukususela ekuqaleni ukuba awukwazi ukuhamba ngaphandle kwekholeji kwaye uhlawule. Ukuhamba nenja kuyimfuneko phezu kwendawo enkulu kunye nexesha elide, kodwa, ngelo xesha, ukuze i-spaniel ingakhathali. Unyanzelekile ukuba atyelele kwiimeko ezingaqhelekanga ukuba afunde ukuhamba kwendawo, ukuqonda ukuba uphi na apho uya khona. Ukususela kwiinyanga ezintathu ukuya kwezine unokuqala ukujwayela inja kwi nyaniso yokuba kufuneka ahambe kufuphi nawe.
I-spaniel yakho iya kuba nempilo kwaye ijabule, inomdla kwaye iyonwabile xa uyifaka emva kwendlebe yakho, ukuba uyayilandela impilo yakhe, uthathe iindlela zokukhusela, mvumele ukuba akhule kwaye aphumelele emoyeni omtsha. Kwaye, inene, thanda inja yakho, oku kungowona nto ibaluleke kakhulu.
Uncedo ekukhetheni intshontsho
Inzala yeLabrador inzala: izitofu, iimpawu
Umxholo wemivundla enobuncwane: inkundla okanye inkululeko?
Uhlobo luhlobo olutshanje lwe-American Eskimo Spitz
Ikhekhe le-nut kwi-cognac
Indlela yokufunda ukubhala ngesandla sakho sasekhohlo?
Asanaro, yoga yaseJapan ebusweni
I-Chanterelles kwi-ukhilimu omuncu e-Ukrainian
I-Dietress - ukulahleka kwesisindo esisebenzayo
I-savoc ye-avovoc ne-ukhilimu omuncu